यस्ता अचम्मको विशेषताका साथ सार्वजनिक भयो 'आइफोन ८'
यस्ता अचम्मको विशेषताका साथ सार्वजनिक भयो ‘आइफोन ८’
काठमाडाैं, भदाै २८ । एप्पलले नयाँ आइफोनको पहिलो झलक बजारमा प्रस्तुत गरेसँगै यसले धेरै चर्चा बटुलिसकेको छ । अन्य स्मार्टफोन भन्दा पूर्णरुपमा भिन्न फिचरका साथ सार्वजनिक भएको एप्पलको ‘आइफोन ८’ लाई लिएर धेरै मानिसहरु उत्साहित छन् ।
यो नयाँ आइफोन ८ मा होम बटन छैन र फेस आइडी फिचर रहेको छ । यसको मतलब अब तपाईले आइफोन खोल्दा कुनै पासवर्ड थिचिरहनु पर्दैन । केवल आफ्नो अनुहार देखाएर मात्रै पनि फोन अनलक गर्न सकिन्छ । यो फोनको माथिपट्टी इन्फ्रारेड क्यामरा जडान गरिएको हुँदा यसले अँध्यारोमा समेत प्रयोगकर्ताको अनुहार पहिचान गर्न सक्छ । यसअघिको आइफोनमा फिङ्गर प्रिन्ट अनलकिङ सिस्टम रहेको थियो । यसका साथै यो फोनमा वायरलेस चार्जरको फिचर समेत रहेको छ । वायरलेस चार्जिङ भएकाले यसलाई चार्ज गर्दा कुनै पनि तारमा जोडिरहनु पर्दैन र झन्झटरहित तरिकाले चार्ज गर्न सकिन्छ ।
आइफोन ८ एप्पलको अहिलेसम्मको सबैभन्दा महङ्गो फोन हो जसको मूल्य १,१४९ अमेरिकन डलर रहेको बताइएको छ । आगामी नोभेम्बर देखि यो फोन बजारमा खरिद गर्नका लागि उपल्ब्ध गराइने बताइएको छ ।
आइफोन ८ को दुवै तर्फ ग्लास कभर हुनेछ जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बलियो ग्लास हुने बताइएको छ । यसलाई पानी र धुलोले समेत केही असर पार्ने छैन । यसका साथै यसमा नयाँ किसिमको मोसनल इमोजीको फिचर समेत रहेको छ । यसबाट हामीले जसरी फेसियल एक्सप्रेसन देखाउछौँ फोनमा भएका इमोजीले पनि हाम्रै एक्सप्रेसनलाई दोहोर्‍याउने छन् । जस्तै हामीले टाउको हल्लायौँ भने इमोजीले पनि टाउको हल्लाउनेछ । ५.८ इन्चको डिसप्ले भएको आइफोन ८ मा आइफोन ७ को भन्दा दुई घन्टा बढी ब्याट्री टिक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सको खुलासासँगै फेसबुकलाई झट्का !
अन्तरिक्षबाट पाँच महिनापछि पृथ्वीमा फर्किए यि अन्तरिक्षयात्रीहरु
फेसबुक बिघटनको सम्भावना कति ?
खेलकुद, विज्ञान / प्रविधि
सेकेण्ड मोबाइल फुटसल टुर्नामेन्ट २०१८ मा ‘ओपो टिम वान’ प्रथम स्थानमा
यौन हिंसाबाट बचाउन नयाँ सेन्सर प्रविधि बजार
क्यान्सरको खतराबाट बचाउँछ यो सानो सेन्सर उपकरण
वैज्ञानिकले बनाए कोशिकाबाट कृतिम भ्रुण
नासाले मंगल ग्रहमा ‘टाइम मेसिन’ पठाउने !
फेसबुक डाटा चोरेको आरोप लागेको क्याम्ब्रिज एनालिटिका बन्द, तर अनुसन्धान नरोकिने
डेटिङ एप : दीर्घकालिन सम्बन्ध बनाउन यस्तो छ फेसबुकको नयाँ एप
फेसबुकको ‘फेसियल रिकोग्निशन’ फिचरमाथि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा
महिनावारीको पीडा कम गराउने स्मार्टफोनको एप